Ny fihenjana miondrika microfiber dia ambany, miaraka amin'ny firafitry ny monofilament marobe, ka ny lamba microfiber dia manana fahamendrehana tsara, fahatsapana malefaka; afaka mampiasa microfiber hamorona lamba tena tery, mba hanatsarana ny fampiasa azy, tsy tantera-drano, mahazaka rivotra, hafanana hamandoana, insulation hafanana, miaraka amin'ny fisehoana toy ny landy, mamirapiratra malefaka.
Raha ampitahaina amin'ny lamba tsotra na lamba vita amin'ny hoditra, ny lokon'ny lamba lohan-doha dia feno kokoa, fahatsapana fahitana ambony. Faux suede headliner lamba manana faran'izay marefo sy malefaka, manasongadina bebe kokoa ny fahatsapana ny rendrarendra, ankoatry ny faharetan'ny fitaovana Suède noho ny hoditra, coefficient avo lenta amin'ny fikorontanana, indrindra mety ampiasaina amin'ny seza, ny fampiasana isan'andro dia tsy hiseho akanjo sy mandatsa-dranomaso. Na dia indraindray aza miaraka amin'ny fifandraisana amin'ny metaly dia mbola mamirapiratra toy ny vaovao. Ny fanoherana ny tasy dia matanjaka tokoa (miaraka amina tatatra moramora afaka mamafa ny kafe na ranom-boankazo), ny fahombiazan'ny fanoherana ny afo dia tsara kokoa noho ny hoditra voajanahary.
ara-nofo Polyesterôla + Polyurethane Teknika fanohanana ba nataony
lamina Embossed sakany 148cm
Ampiasao Kodiarana; Auto tontonana anatiny; Seza fiara; Tafontranon'ny fiara; Valin'ny varavarana mandeha ho azy endri-javatra Anti-Mildew, fanoherana ny abrasion
Toerana niandohana Shina Anaran'ny marika Hoditra Bensen
MOQ 500 Meters Loko Loko namboarina
Surface Fanoherana mahery vaika Teny lakile Nanofibers
Fonosana 30 Metre / Roll Fihetseham-po Hery malefaka, Elastika
F: Ahoana ny fomba ahazoana santionany, ary inona ny ora fanaterana santionany.
A: Ny santionany maimaim-poana dia azo alefa fotsiny mandoa ny sarany mazava. Ao anatin'ny herinandro iray dia afaka atolotra anao.
F: Inona ny fatra farany ambany amin'ny baikon'ny entanao.
A: Ho an'ny vokatra ao amin'ny tahiry, 10 metatra ny MOQ. Ny loko namboarina dia 500 metatra
F: Inona ny ora amin'ny lisitry ny sofina rehefa afaka mandefa ianao.
A: Ny vokatra ao anaty tahiry dia hatolotra ao anatin'ny 3 andro, ary ny fotoana fanaterana ny vokatra manokana dia 15 andro. Afa-tsy ireo singa manokana toy ny fialantsasatry ny lohataona sns.
F: Ahoana ny serivisy aorian'ny fivarotana.
A: Manome serivisy tsara aorian'ny fivarotana ho an'ny baiko tsirairay izahay, ny olana rehetra horaisinay ary halaminay ho anao. Fiantohana kalitao telo taona ho anao.
Sary fampiharana fampiharana
Teo aloha: Tsara kalitao Auto Suede lamba PU Microfiber hoditra
Manaraka: Red Microfiber Suede Goat synthetic Suede Cars hoditra
Suède faux fiara
Faux Suede hoditra
Suede Automotive hoditra
Fitaovana hoditra mavokely microfiber ho an'ny fiara amin'ny tahiry
0.25mm-3mm vita amin'ny hoditra vita amin'ny rivotra vita amin'ny rivotra ho an'ny fiara ...
Mikraoba miady amin'ny lokony maro sy marefo ...
Custom Faux Synthetic PVC Auto hoditra ho an'ny fiara ...
Fiara vita amin'ny fiara vita amin'ny vita amin'ny fiara vita amin'ny vita amin'ny vita amin'ny fiara vita vita vita amin'ny fiara vita amin'ny fiara vita vita vita vita amin'ny fiara vita amin'ny fiara vita amin'ny fiara vita amin'ny fiara vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita fotaitao vita amin'ny fiara vita amin'ny fiara vita amin'ny fiara vita ...
Malefaka sy maharitra fiara Microfiber Suede hoditra f ...